Iphoyisa libulawe abasolwa ngokuba yizihonga | News24
Iphoyisa libulawe abasolwa ngokuba yizihonga
Bamako – Abasolwa ngokuba yizihonga babulale iphoyisa esehlakalweni esingavamile esenzeke eningizimu nezwe laseMali ngoLwesithathu, ngaphambi kwezinsukwana nje amavukelambuso eTuareg-led asayine isivumelwano sokuthula.
UNgqongqoshe uthe abashokobezi abangamagwala babulale iphoyisa eMisseni, ngasemngceleni ohlukanisa izwe laseMali nelase-Ivory Coast.
"Funda nalolu daba: Ugwetshiwe oshaye intombi eyisola ngokuqomaize iquleke
Isikhulu sithe izihonga zigasele ngezithuba zabo-02:00,
"Ngizwe ukuqhuma kwesibhamu enkanjini yaseMisseni. Izihonga bezimemeza zithi -'Allahu Akbar [uNkulunkulu mkhulu kakhulu].
"Le nkanji bayiphendule eyabo njengoba sebefake nefulegi elimnyama kuyona."